Usuku My Pet » 5 Unique Summertime Date Ideas
5 Unique Summertime Date Ideas
Igcine ukubuyekezwa: -nov. 25 2020 | 2 imiz ufunde
Summertime yisikhathi esiphelele ukukhahlela emuva futhi ujabulela isikhathi nabangane nomndeni ngokufanayo. Kuba futhi isikhathi ephelele ukuze uthole ukujabulela ezinye fun, hhayi run-of-the esigayweni-izinsuku zakho. Hlola lezi unique ehlobo date imibono ezinhlanu nakanjani ziba nezinkumbulo ezinhle eside emva okushisa ziyethile.
Canoeing Adventures: Uma kukhona umfula noma ichibi enkulu endaweni ethile ngaphakathi ukushayela ibanga, kukhona ithuba kuhle ukuthi ukhona isikebhe umnikelo spot (noma kayak) Ukuqashisa. Eziningi zalezi amabhizinisi avulekele kuphela phakathi nezinyanga zasehlobo, ngakho qiniseka ukubhuka adventure kude ngokwanele kusengaphambili ukuthi ngeke akuvumele phansi nokudunyazwa ezifikayo endaweni kuphela ukuthola zonke izikebhe esikhona kakade ngahlola for the day. Ngokuvamile sites like Groupon babe amadili okuqashiswa enjalo futhi, ngakho ukonga imali ngokusebenzisa abasebenzisa omunye lezi zikhundla Kungase kungenzeka. Phathani umphako nepikiniki ezitsheni manzi ukugcina nobabili usuku lwakho kahle fed ngesikhathi adventure yakho.
Frisbee noma Mini Golf Izinselele: Yeqa dark bowling alley phakathi nezinyanga zasehlobo futhi ukhethe enye yalezi zindlela fun igalofu esikhundleni. Nakuba igalofu mini ivame ukuba abe choice "ephephile" ubani engazethembi / amakhono yakhe wezemidlalo, the benamakhono kwezemidlalo more angase afune ukuthatha ithuba awubheke a Frisbee wendawo igalofu. Hhayi kuphela zombili lezi imisebenzi ephelele ukugcina ithulisa sezimiso at bay, kodwa ungumuntu futhi izindlela ezinkulu zokusondelana kancane usuku lwakho njengoba wena ubasize ezabo ephelele ebeka / ifomu uphonsa. Nyá usuku lwakho nge uhambo wendawo snow Isigaxa umjondolo-omunye ibhizinisi ngokuvamile kuphela evulekile ngesikhathi sasehlobo.
Dog Park Izinsuku: Uma nobabili wena kanye usuku lwakho kukhona okhuthele abathandi inja, asikho isidingo ukushiya abangane bakho Canine ngemuva njengoba ubhekisa amabombo out for an kusihlwa fun. Nakuba Kuvamile ukuba zavalwa phakathi nezinyanga zasebusika, inja parks iningi nebasekhaya evulekile ngokunganaki ngesikhathi sasehlobo. Uma kwenzeka, qiniseka ukuthi uyazifunda kuzibuyekezo online futhi cwaninga yimiphi imithetho ethize for ikakhulukazi inja parks ngaphambi kokukhuluma inja yakho nosuku kubo. Uma kungekho parks inja kubonakale evulekile endaweni yakho, ekhetha ukuhlela usuku inja-ukuhamba nabanye yakho ephawulekayo Kungase option ehlukile fun esikhundleni. Nakekela ukuletha kanye namanzi kakhudlwana ukuze agcine wonke umuntu lipholile futhi amanzi amaningi ngesikhathi kuwe usuku.
Outdoor Theater kusihlwa: Basebenzise kusihlwa efudumele futhi ufunde kabanzi mayelana nobuciko wangakini scene. Emadolobheni amaningi anezinhlelo amanani free noma encishisiwe for amathikithi for ongaphandle yemidlalo nemicimbi, kanye lokwentiwako esukela nomculo ukuze amadrama Shakespearean ukuze choir amakhonsathi. Bands Local nazo ngokuvamile lenza imibukiso ezindaweni ezahlukene ngaphandle phakathi nezinyanga zasehlobo kanye. Uma kungekho ongaphandle abacula ubuciko ongakhetha kubonakale utholakala endaweni yakini, cabanga ebheke yimuphi drive-in amabhayisikobho esikhundleni; nakuba engeke efanayo njengoba ukusebenza bukhoma, ukushayela-in yeshashalazi Asekhona izinga ethile ezingaphelelwa isikhathi kubo.
Geocaching: Nakuba lokhu ngokomthetho akuyona umsebenzi lokho kuphela kungagcini zasehlobo, ithuba elingcono sezulu kangcono ngokuqinisekile ngeke ulimaze amathuba okuba fun kokuba ngesikhathi usuku Geocaching. Wayeboleka uhlelo GPS izixhumanisi kusuka kumngane noma usebenzise smartphone yakho ukuze ulifundise search yakho, futhi ukucwaninga geocaches zendawo ngaphambi nokuqala kosuku lwakho. Qiniseka futhi alethe kanye into fun for wena kanye usuku lwakho ukushiya in the isilondolozi!
Can Pet Komzimba and Dating babeyinto eyodwa?